Mgbanwe Agbanwe Agba - Ngwakọta nke spessartite na pyrope garnet - video
A mix nke spessartite na pyrope. Nkume a na-egosi mgbanwe agba site na brownish na ìhè ụtụtụ na pink pink na ìhè ọkụ. Ihe a na-ahụ anya dị oke egwu ma dị ịrịba ama, nke karịrị nke alexandrite dị oke ọnụ.
Onye na-adịghị ahụkebe ma dị oké ọnụ ahịa nke ndị na-ahụ maka nkume ndị dị na nkume. A na-achọsi ike na ya nwere ike ịgbanwe agba. Ọ dabere na ụdị isi iyi. Ike na-agbanwe agba na-emehiekarị mgbe niile maka pleochroism. Nke bụ ike igosi agba dị iche na-adabere n'ile anya. Ọ bụ ezie na ọdịdị mgbanwe nke agba adịghị adabere na ikiri elekere. Ọ bụ ụdị ngwakọta nke spessartite na pyrope nakwa n'ọtụtụ ọnọdụ, nwekwara ike ịnwe ihe dị iche iche nke na-emepụta ma ọ bụ almandine garnet.
Ọ bụ otu nke mineral silicate. Anyị na-eji ya kemgbe Ọchịchị Ụka dị ka nkume dị egwu na abrasives.
Ngwongwo ndi mmadu nile nwere ihe ndi ozo di iche iche na ihe di iche iche di iche iche di iche iche, ma ha di iche iche na mejuputa. Ụdị dị iche iche bụ pyrope, nakwa almandine, spessartine, nnukwu (ụdị nke bụ hessonite ma ọ bụ cinnamon na tsavorite), uvarovite na andradite. Nkume ndị ahụ nwere usoro ihe ngwọta abụọ: pyrope-almandine-spessartine nakwa uvarovite-grossular-andradite.
Mgbanwe nke mgbanwe agba nwere ike ịdị ike, n'ihi na ọ na-abụkarị ihe kachasị mma. Ọtụtụ n'ime nkume ndị ahụ ga-egosi agba aja aja ma ọ bụ ọla kọpa mgbe a na-ele ya anya n'oge ìhè, ma mgbe a na-ele ya anya n'okpuru ọkụ ọkụ, ọ ga - apụta na pink na agba. E nwekwara ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ na-agbanwe agba. Iji nwee obi ụtọ maka ụdị mgbanwe nke agba agba, a ghaghị ịhụ ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche, gụnyere ìhè ụtụtụ, oge ehihie ehihie, ìhè ọkụ na ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
Ọ dịghị ọgwụgwọ
Dị ka ọtụtụ nkume ndị dị na tannet, agbanwebeghị mgbanwe agba ka a ga-emeso ma ọ bụ mekwuo ya n'ụzọ ọ bụla.
ịzụta ụcha akpụkpọ anụ na-agbanwe agbanwe na ụlọ ahịa anyị
Ngbanwe sphene agba
Tags Agba ịgbanwe, Sphene
Tags Garnet, Giant gemstones, Safaya
Agba ịgbanwe Chrome Tourmaline
Tags Chrome, Agba ịgbanwe, Tourmaline